Global Voices teny Malagasy » Brezila, Goavana Vaovao Eo Amin’ny Sehatry Ny Fiadiana Tsy Mahafaty · Global Voices teny Malagasy » Print
Brezila, Goavana Vaovao Eo Amin'ny Sehatry Ny Fiadiana Tsy Mahafaty
Voadika ny 20 Jona 2013 16:00 GMT 1	 · Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo Nandika (fr) i Henri Dumoulin, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Tiorkia, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Ity lahatsoratra nosoratan'i Bruno Fonseca sy Natalia Viana, avy amin'i Agência Pública, ity dia nivoaka tamin'ny voalohany tamin'ny lohateny hoe “Bomba brasileira na pele turca”  (grenady breziliana hamelezana ny Tiorka) , izy ity dia ao anatin'ny fanadihadiana manokana momba ireo vondron'olona mpanery ny manampahefana sy ny orinasa mpamokatra fitaovam-piadiana ao Brezila #IndústriaBrasileiraDeArmas . Hisy lahatsoratra telo momba izany fanadihadiana izany eto amin'ny Global Voices Online.
Mampanontany tena ny Fitsarana Breziliana ny fampiasana fitaovam-piadiana tondroina ho tsy mahafaty raha miezaka ny mampiroborobo ny fanondranana azy ireny ho any amin'ny firenena tahaka an'i Torkia na ny Emirà Arabo ny vondron'ny mpamokatra APEX. Tamin'ny novambra lasa teo , nanokatra famotorana momba ny vokatry ny fampiasana ireny fitaovam-piadiana ireny ao amin'ny firenena ny Fampanoavana eo anivon'ny zon'olom-pirenena ao Brezila. Vokatry ny fikezahana nataon'ny ONG Tortura Nunca Mais (Tsy hisy intsony ny fampijaliana) avy ao São Paulo. Misy vondrona mpanadihady ahitana solontenan'ny minisiteran'ny fitsarana, ny fiarovana, ny fahasalamana, avy amin'ny sampandraharahan'ny zon'olombelona eo anivon'ny prezidansan'ny repoblika, avy amin'ny polisy federaly sy ny polisy nasionaly ary monisipaly napetraka hamita volavolan-dalana momba io raharaha io. Tsy misy tokoa manko fepetra nasionaly mifehy ny fidirana an-tsehatra sy miantoka ny fomba fampiasana tsara izany fitaovam-piadiana izany.
Tsy maintsy manao fanadihadiana fampitahana ihany koa io vondrona mpanadihady io mijery ny fanofanana manokana nomena ny polisy sy ny fiantraikany ara-pahasalamana ho an'ny olona niharany, indrindra moa rehefa amin'ny fampiasana angovon'aratra sy fangaro shimika.
Milaza ny heviny i Wilson Furtado, avy ao amin'ny Tortura Nunca Mais-SP :
Tsy mitsaha-mampiasa ity karazana fitaovam-piadiana lazaina fa tsy mahafaty ity ny polisintsika… Raha tokony hisambotra ny polisy dia ny hitifitra kosa no ivononany mandrakariva, ka mahavoa ny tanora manao fihetsiketsehana amin'ny ankapobeny.
Mitsipaka hilazalaza ny asan'ny orinasa breziliana manondrana fitaovam-piadiana ny minisiteran'ny fampandrosoana, indostria, ny varotra ivelany/Sampan-draharaham-panjakana / lisansa Creative Commons
Tadiavin'ny vondrona mpanadihady, ankoatra ny fampahafantarana feno ny olom-pirenena, ny lalàna manoritsoritra sy mifehy ity karazam-piadiana ity, mamaritra ny karazam-piadiana mahazo alalana sy ny fenitra arahina raha hividy ary (mamaritra) izay manara-maso ny fampiasana azy.
Ny fitaovam-piadiana novokarin'ny Condor no ampiasain'ny governemanta federaly sy ny polisy manerana ny firenena. Ny fandaharan'asa federaly ohatra dia mihevitra ny hividy ireo fitaovam-piadiana ireo ho an'ny Vondronkerin'ny Polisy Mpampandry Fahalemana (UPP) ao Rio de Janeiro sy ho an'ireo vondro-tafika manokan'ny fanjakana 12 nirotsaka tao amin'ilay fandaharan'asa. Tafiditra ao anatin'izany ny poleta karazana “tasers” sy ny tsifitra dipoavatra. Noheverina hampiasaina amin'ny fotoan-dehibe tahaka ny Amboran'ny Konfederasiona na ny Mondialy 2014 izy io : izay indrindra no efa nanokanan'i Brezila tetibola mitentina 49 tapitrisa Reais hividianana Condor  (17 tapitrisa €).
Novidian'ny governemanta federaly ihany koa ny (karazana) baomba mandatsa-dranomaso naondrana tany Torkia mba hiomanana amin'izay mety hampiasana azy amin'ny mondialy 2014 sy mandritra ny lalao olaimpika.
Tamin'ny avrily 2012 ny Vavahadin'ny Mangarahara  namoaka vaovao fa ny governemanta federaly dia nividy fitaovam-piadiana tsy mahafaty mitentina 1,5 tapitrisa Reais (500 000 €) tao amin'ny Condor hidiran'ny tafika an-tsehatra ho fampanajana ny lalàna sy ny filaminana tao amin'ny fokontaniny avaratr'i Rio de Janeiro antsoina hoe complexos do Alemão e da Penha. Izany fitaovam-piadiana izany dia ahitana grenady mirefotra (GL307) miisa 1 125, miisa 500 ny grenady maro fiantraikany miaty dipoavatra (GM 102) ary miisa 500 grenady manetroka, miisa 29 500 ny andiam-bala fingotra ry 700 ny grenady mandatsa-dranomaso fanao amin'ny fihetsiketseha-panoherana tsindraindray (GL -310), dia ireo izay mitovy tamin'ny nampiasaina hamoretana ny fihetsiketsehana nitranga tany Torkia.
Baomba mandatsa-dranomaso naondrana any Torkia novidian'ny fitondrana federaly izay mety ampiasaina amin'ny mondialy 2014 sy ny lalao olaimpika/Sampan-draharaham-panjakana/lisansa Creative Commons
Tamin'ny jona 2010 ny governemanta ao Rio de Janeiro no nanafatra Condor hitandroana ny Vovonana Rio+20  : fividianana tsifitra dipoavatra 900, grenady mandatsa-dranomaso (kambatelo) 1300, grenady mirefotra 870 ary andiam-bala kalibra 12 vita fingotra 5000.
Ho an'ny Amboara : bolongam-bola 50 tapitrisa Reais
Nanao fifanarahana 49,5 tapitrisa Reais ny governemanta federaly hividianana fitaovam-piadiana tsy mahafaty an'arivony amin'ny orinasa Condor, hampiasain'ny polisy amin'ny tanàna rehetra tafiditra amin'ny fanatontosana ny amboaran'ny Konfederasiona 2013 sy ny Mondialy 2014.
Ny fifanarahana niaraha-nosoniavina tamin'ny Condor S.A. tamin'ny 26 novambra 2012 io dia manankery hatramin'ny 31 desambra 2014, ary efa niomanana ao ny fandefasana karazam-piadiana isan-karazany ka 2200 ireo kojakoja miaraka tsy mahafaty sy mitifitra akaiky ahitana tsifitra dipoavatra sy roatran-dipoavatra, grenady mandatsa-dranomaso misy puce azo anarahan-dia azy, grenady mankarenin-tsofina ampiasaina ao anaty trano na any ivelany ary grenady mirefotra “sary sy feo”….Manampy izany ny kojakoja miaraka tsy mahafaty miisa 449 mitifitra akaiky sy bala fingotra ary andiam-bala mihanaka fiantraika ( bala mibontsina rehefa mifandray amin'ny hoditra mba hialana amin'ny fandoahana).
Azo jerena ato manontolo ilay fifanarahana. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/20/49453/
 “Bomba brasileira na pele turca”: http://www.apublica.org/2013/06/gas-lacrimogeneo-brasileiro-utilizado-pela-policia-na-turquia/
 49 tapitrisa Reais hividianana Condor: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=C2C10106DD4B256DFCA37A491FF8ED21.portalcopa?execucaoFinanceira=172&empreendimento=383